MSG, noma ukudla okufakiwe E621 - ikhemikhali sithuthukisa ukunambitheka ukudla kanye nemikhiqizo. Manje samanje cishe zonke izinongo izithasiselo zokudla. Eminyakeni yamuva, abantu abavamile kukhona nexhala ngalolu daba: "Iyingozi uma MSG?" abakhiqizi powder zithi it nje unikeza izitsha ukunambitha enkulu, futhi yonke inkulumo mayelana harmfulness salo sibi.
E621 MSG yasungulwa eJapane ngo ekuqaleni kwekhulu elidlule. Khona-ke ososayensi Japanese ucwaningo lwathola ukuthi lokhu crystalline powder emhlophe uyakwazi ukwandisa palatability we inyama izitsha. Okwamanje bekungakacaci noma engaba ngu-40 kuze kube yilapho lezi izakhiwo ngokuyisimangaliso akawasebenzisanga abakhiqizi bokudla. Sodium glutamate ngezinga ezimbonini ekuqaleni waqala ngokungeza e ayi kanye nesobho ezomile. Ngenxa yempumelelo imikhiqizo enjalo abakhiqizi Bangene ethukuthele. Kuze kube manje E621 MSG sengezwe cishe zonke ukudla. Kuvumela hhayi nje kuphela ukulondoloza umbala umkhiqizo, kodwa babuye basinikeze ukunambitheka ocebile. Ngaphezu kwalokho, lo powder is esetshenziselwa ukwenza umuthi: amazinyo, izifo pheshana emathunjini kanye nomfutho wegazi ophezulu.
MSG kuyinto into yemvelo - usawoti sodium ka glutamic acid. Kubantu, lo mkhiqizo futhi kukhiqizwa, kodwa izinto eziningi ezincane, iqhaza umzimba, kanye nomsebenzi we isimiso sezinzwa kanye nobuchopho. Leli qiniso ukuvumele abakhiqizi Izithako ukudla zithi umkhiqizo wabo akuyona kuphela ayinangozi, kodwa futhi ebalulekile mayelana nomzimba womuntu, Ukwakheka umndeni. Kodwa, ngokusho kongoti, kubalulekile kuphela MSG, ekhiqizwa ngokwemvelo eziqukethwe ukudla okuvamile ukuthi azibanga kabusha. Ngo isikali zezimboni le glutamate isicelo, okuyinto etholakala ngemishini.
Ngenxa glutamate ithuthukisa palatability komkhiqizo, abakhiqizi ngokuvamile ukuyisebenzisa ukuba kusebenze yekhwalithi ephansi izinto zokusetshenziswa, ngoba E621 uyakwazi ukucindezela ngisho nokunambitha ezibolile inyama. Yingakho iningi namafemu izitshalo ukusekela lokhu okufakiwe ngazo zonke izindlela. Phela, kuyasiza ukugwema ucabanga ngisho ukuthengisa ukudla osekonakele. Nokho, lo powder libhekisela kuvunyelwe izithasiselo zokudla.
Ingabe MSG kuyingozi empilweni yomuntu? umkhiqizo Synthetically elakhiwe iqukethe ezinobuthi ekhuthaza excitation amangqamuzana obuchopho. With ukusetshenziswa njalo kungase ukuzwa izinguquko ezingenakuhlehliswa lamaseli wathi. Ikakhulukazi, glutamate contraindicated kubantu besifazane abakhulelwe, ngoba placenta uyakwazi ukungena emzimbeni ezingenzeka embungwini, owabangela umonakalo isimiso sezinzwa. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa njalo E621 umlutha, okuyinto efana ngokwemvelo kuya kwezidakamizwa. Umzimba nje iyeke ukuthatha zemvelo ukunambitheka izinga imikhiqizo ngenxa yoma we ukunambitheka efihlekile. Ngaphezu kwalokho, glutamate kungaba imbangela komzimba, futhi ukuqunjelwa. Kodwa ukusetshenziswa amakhambi emvelo kanye nezinongo uyophinde uzizwe ukunambitheka engokwemvelo ukudla.
Mayelana amahlengethwa amaningi indlela bukhoma, kanye nezinye amaqiniso ezithakazelisayo ngalezi zilwane